सहवासमा स्त्री र पुरुषमध्ये कसलाई बढी आनन्द आउँछ ? शास्त्र यसाे भन्छ … – Todays Nepal
सहवासमा स्त्री र पुरुषमध्ये कसलाई बढी आनन्द आउँछ ? शास्त्र यसाे भन्छ …
मान्छेले परेर मात्र होइन, पढेर पनि जान्दछ भन्ने दृष्टान्त महाभारतमा फेला पर्छ। भीष्मको बारेमा यी आजीवन ब्रह्मचारी हुन् भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यी किन ब्रह्मचारी हुन पुगे भन्ने विभिन्न ढङ्गबाट कथाहरू रचिएका छन्। त्यो बेग्लै विषय हो। जे होस्, ब्रह्मचारी भनेपछि यिनलाई स्त्री विषयक र अझ सम्भोग विषयक कुरा पक्कै पनि थाहा छैन होला भन्ने अनुमान गर्नु स्वाभाविक हो। तर होइन।
युधिष्ठिरलाई एउटा जिज्ञासाले पेट पोलिरहेको थियो लामो समयदेखि। त्यो के भने समागमको समय स्त्री र पुरुषमध्ये कसलाई बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ होला भनेर युधिष्ठिरले निष्कर्ष निकाल्न सकेनछन्। सोध्‍ने पो कसलाई? अन्तमा उनको नजरमा भीष्म नै परेछन्। युधिष्ठिरलाई लागेन कि यी ब्रह्मचारीलाई स्त्रीसँगका कुरा के थाहा भनेर। भीष्मले पनि आफूलाई अनुभव नभएको कुरामा केही बताउन नसक्ने भनेनछन्। बरू सुनाएछन् एउटा कथा भंगस्वानाको। भीष्मले पढेका थिए नि आखिर, परेको पो थिएन।
भंगस्वाना — देवेन्द्र, साँचो कुरा भन्छु सुन। म पहिला पुरुष स्वरूपमा धेरै स्त्रीसंग गरेँ। सन्तान पनि प्राप्त गरेँ। पछि तिम्रै कारणले स्त्री बनेर पुरुषहरूसँग सहबास गर्ने मौका पाएँ। स्त्री बनेर पुरुष सहबासमा पाएको आनन्दको एक अंश पनि पुरुष बनेर स्त्री सहबासमा थिएन। स्त्री बनेर सम्भोगानन्दमा डुब्नुमा जुन अप्रतिम सौन्दर्य छ, त्यो पुरुष बनेर मैले पाउन सक्दिनँ। त्यसैले मलाई यही रुपमै रहन देऊ देवेन्द्र! राम लोहनीको फेसबुकबाट
जापानमा नेपाली शरणार्थी आवेदकहरु: हवाई जहाज चार्टर गरेरै नेपाल फर्काईने तयारी
मृतसागर (Dead Sea) किनारमा ज्योति मगरको हट पोज (तस्विरहरू)